Ofdị ezumike dị iche iche, kedu mgbe ọ ga-eji mee ya?
Edere site Tranquillus | Feb 1, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
N’ozuzu, okwu “ahapụ” na-egosi ikike ịkwụsị ọrụ nke ọ bụla onye ọ bụla na-arụrụ ọrụ nyere onye ọrụ ya. N'ime usoro ndị a, anyị na-akwado ịme ka ị chọpụta ihe dị iche ụdị ezumike yana usoro ha di iche.
Oge a na-akwụ ụgwọ bụ oge ezumike nke onye were ya n'ọrụ, n'ihi ọrụ iwu, na-akwụ onye ọrụ ya ụgwọ. Ndị ọrụ niile nwere ikike inweta ya, na agbanyeghị ụdị ọrụ ha ma ọ bụ ụdị ọrụ ha na-arụ, ntozu ha, otu ha, ụdị ụgwọ ọrụ ha na usoro ọrụ ha. Agbanyeghị, n'agbanyeghị na ha bụ iwu dị n'ọtụtụ mba, ọnụ ọgụgụ ezumike a na-akwụ ụgwọ dịgasị iche iche site n'otu mba gaa n'ọzọ. Agbanyeghị, na France, ndị ọrụ niile nwere ikike zuru ezu iji ụbọchị 2 nke ezumike ụgwọ kwa ọnwa. Na nkenke, onye ọrụ nke na-arụrụ otu onye na-arụrụ ọrụ ọrụ na otu ebe ọrụ ga-erite uru site na ụgwọ ezumike
Gbanyụọ akwụ ụgwọ
Mgbe anyị na-ekwu maka ịhapụ ọrụ akwụghị ụgwọ, anyị na-ekwu maka nke a na-edeghị nke Iwu Ọrụ. Iji rite uru na ya, onye ọrụ ahụ edobeghi ọnọdụ ma ọ bụ usoro ọ bụla. N’aka ozo, o bu nkwekorita ndi mmadu na onye oru n’uche choro oji oge ya na ulo oru ya. Na nkenke, onye ọrụ nwere ike ịrịọ maka ezumike akwụghị ụgwọ maka ebumnuche dịgasị iche. Ya mere, enwere onwe ya iji ya maka ebumnuche ọkachamara (ịmepụta azụmahịa, ọmụmụ, ọzụzụ, wdg) ma ọ bụ maka ebumnuche onwe (izu ike, ọmụmụ, njem, wdg). Maka ụdị ezumike a, oge ọ bụla ọ ga-anọ na ya ga-adịgide, a gaghị akwụ onye ọrụ ụgwọ.
Dabere na Usoro ọrụ, onye ọrụ ọ bụla rụzurula ọrụ otu afọ kwesịrị ịnwe ezumike kwa afọ. Oge ezumike a kwụrụ ụgwọ izu ise ugbu a na - eme ugbu a, na-ebighi n'uche oge ezumike ọha na izu ọrụ nke onye were ya n'ọrụ nyere. N'ezie, a na-enye ezumike kwa afọ naanị dịka iwu si dị na nhazi ụlọ ọrụ. Na nkenke, onye ọrụ ọ bụla, ọrụ ọ bụla, ntozu ya, oge ọrụ ya nwere ike irite uru na ezumike a.
GỤỌ Ụtụ isi maka ndị mba ọzọ na France
Oge nnwale, dị ka aha ya na-egosi, bụ ụdị ezumike pụrụ iche nke, na - enye ya oge ọ bụla, na - enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịnọghị ya iji kwadebe maka ịme otu ma ọ bụ karịa. Iji rite uru na ezumike a, onye ọrụ ahụ nwere echiche nke inweta aha / diplọma nke agụmakwụkwọ teknụzụ akwadoro ga-enwerịrị ike igosipụta ogo onye ọnwa 24 (afọ abụọ) ma nwee ogo nke onye ọrụ ụlọ ọrụ maka ọnwa 2 (afọ 12). Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na onye ọrụ nke na-azụkarị ọrụ na-erughi mmadụ iri ga-egosipụta ogo nke ọnwa 1.
AKW .KWỌ AH TR NA-AKNDZI
Onye nkuzi ọzụzụ onwe ya bụ otu nhazi nke onye ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ma ọ nọ na CDI ma ọ bụ CDD. Site n'enyemaka a, ndị ọrụ niile na-enwe ike ịgbaso otu ọzụzụ ma ọ bụ karịa, n'otu n'otu. Na nkenke, nke a ma ọ bụ usoro ọzụzụ a ga - enyere ya aka iru ogo mmụta dị elu ma ọ bụ nye ya ụzọ dị iche iche mmepe iji rụọ ọrụ ya n'ime ụlọ ọrụ.
IKPUTA EGO, NA-AH. NA UNU NA UNU
Oge ezumike ego, nke mmekọrịta na nke ndị otu na-ahapụrụ onwe ha ọrụ, bụ ụdị ezumike a na-enye ndị ọrụ ọ bụla ga-achọ isonye na nkuzi akụ na ụba ma ọ bụ nke mmekọrịta ma ọ bụ nke otu. Anaghị anabata ezumike a na-enweghị ọnọdụ okenye ọ na-enye onye ọrụ aka ịkwadebe maka ịme mmega ahụ na ọrụ ndị otu ya.
GỤỌ Debanye ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ French
MMUTA NA AKW ANDR AND AH RES
Achingkụzi na nyocha nyocha bụ ụdị ezumike nke na-enye ndị ọrụ niile ohere izi ihe ma ọ bụ mezuo (na-aga n'ihu) ọrụ nyocha ha dị iche iche na ụlọ ọrụ nzuzo na nke ọha. Iji rite uru na ya, onye ọrụ ga-ebu ụzọ nweta nkwenye nke onye were ya n'ọrụ na mgbakwunye na ịkwanyere ọnọdụ ụfọdụ. Nkuzi na nyocha na-adịgide na nkezi:
-8 elekere kwa izu
-40 elekere kwa ọnwa
-1 afọ oge.
Ọ bụ ihe mmadụ maara na Usoro Ọrụ na Nkwekọrịta Mkpokọta ehiwela ezumike nká na-akwụ ụgwọ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ọrịa arịa nke akwụkwọ akwụkwọ ahụike gbaara, onye ọrụ, ihe ọ bụla ọnọdụ ya (njide, onye ọzụzụ, nwa oge), nwere ikike “ezumike” ezumike ọrịa. Ogologo oge ezumike a ka dọkịta kpebiri na ọ dabere n'okwu a ga-emeso ya.
Iji rite uru na ezumike ọrịa, onye ọrụ ahụ ga-ezigara ndị were ya ọrụ akwụkwọ ọkwa banyere ịkwụsị ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ ọgwụ ahụ n'ime oge 48 na-anọghị ya.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ata ahụhụ na ọrịa ụfọdụ siri ike, a na-atụkarịkarị ya CLD (ezumike ogologo oge). Nke a na-akwadoro ịgbaso echiche nke kọmitii na-ahụ maka ahụike ma nwee ike ịdị ogologo n'etiti afọ 5 na 8.
Womenmụ nwanyị niile na-arụ ọrụ dị ime nwere ikike inweta ezumike nwa. Oge ezumike a gụnyere oge ezumike nwa na oge ezumike nwa. Oge ezumike nwa ga-anọ n’izu isii tupu ụbọchị ezipụta. N'ihe gbasara ezumike, ọ na-adị izu iri mgbe ekwenyechara ya. Agbanyeghị, oge ịhapụ akwụkwọ a dịgasị iche ma ọ bụrụ na onye ọrụ amụọla ụmụ dịkarịa ala.
GỤỌ Atụmatụ maka imeghe akaụntụ akụ na France
AKW FORKWỌ maka ụdị nkuzi
Hapụ maka ịtọlite ​​azụmaahịa bụ ụdị ezumike nke na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịhapụ ezumike ma ọ bụ itinye obere oge iji nwee ike itinye ezigbo ego n'ọrụ ya. N’aka ozo, ikike a nyere onye oru aka ikike ịkwụsịtụ ọrụ aka ya nwa oge ka o wee nwee ike imeputa otu mmadu, oru ugbo, ahia ma obu ihe nka. Ọ bụ nke a zuru oke maka onye ndu ọ bụla nwere echiche nke ibido n'enweghị nsogbu. Ohere ikike maka okike azụmahịa na-enyekwa onye ọrụ aka ịchịkwa azụmaahịa ohuru maka oge edepụtara.
Onye ọrụ nke chọrọ ị rite uru na ezumike a ga-enwerịrị ogo nke ọnwa 24 (afọ abụọ) ma ọ bụ karịa na ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ. Oge izizi maka okike azụmaahịa nwere oge dị ka 2 afọ emere maka mmeghari otu ugboro. Agbanyeghị, ego adịghị akwụ ụgwọ ya.
AKWKWỌ OZI NA ọrịa
Oge ezumike maka ọdachi emere bụ ezumike pụrụ iche nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ n'ọnọdụ ụfọdụ. N'ezie, a na-enye onye ọrụ ọ bụla bi na nke a oge ọ bụla bi na mpaghara nsogbu nọ na mpaghara a, ọ ga - abụ nsogbu nwere ike ibute nsogbu a. Ọ bụ ya mere onye ọrụ ahụ ka ọ nwee ụbọchị iri abụọ ọ ga-enwe ike iso na-eme ihe omume ndị otu a na-enyere ndị ọdachi ahụ metụtara aka. A naghị akwụ ya ụgwọ ebe ọ bụ na e were ya n'afọ ofufo.
Ofdị ezumike dị iche iche, kedu mgbe ọ ga-eji mee ya? Eprel 25, 2020Tranquillus
gara agaSoro otu na-emekọ ihe na obere ime ụlọ na Slack
-esonụIhe atụ nke akwụkwọ ozi iji rịọ maka nhapụ akwụghị ụgwọ.
Debanye ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ French
Mepee akara ekwentị ma chọta onye na-ahụ maka ịntanetị na France
Ka oge ngafe na-arụ ọrụ
A ga-akwụ gị ụgwọ Coronavirus na ele mmadụ anya n'ihu, 84% nke ụgwọ ọnwa gị.